Tetikasa « Loharano » sy ny Raharaham-bahiny: miantso firotsahana an-tsehatra ireo tanora “Diaspora” | NewsMada
Tetikasa « Loharano » sy ny Raharaham-bahiny: miantso firotsahana an-tsehatra ireo tanora “Diaspora”
Hitondra ny anjara birikiny. Efa eto an-tanindrazana ary miasa amin’ny kaominina telo : Manjakandriana sy Talata volonondry ary Mantasoa ireo mpilatsaka an-tsitrapo, teratany malagasy miisa sivy miasa sy mianatra any ivelany “Diaspora”.
Nivahiny tao amin’ny fandaharana “Ambarao” ao amin’ny radio Alliance 92 FM sy ny Taratra FM 106.2 izy ireo, omaly. Anisan’izany Rakotoarivelo Mamy sy Rakotoniaina Fehizoro. “Maniry ny hitohizan’ny asanay tahaka izao ary hivelatra bebe kokoa izany. Hitera-bokatsoa ho an’ireo kaominina ireo sy i Madagsikara. Ndao hiara-kiasa hanova ny firenena. Mila antsika tanora mirotsaka an-tsehatra ho amin’ny fampandrosoana firenena. Mila manana tanjona ho amin’ny fiainanao ianao ary koa ho an’ny manodidina sy ny firenena… Manao soa ho an’ny tena sy ny hafa”, hoy izy ireo.
Tafiditra amin’ilay tetikasa “Loharano” iarahana amin’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny sy ny OIM izao asa an-tsitrapo ataon’izy ireo izao. Niainga tamin’ny antso nataon’ny minisitera izany mba handraisan’izy ireo anjara amin’io tetikasa filamatra io. “Resy lahatra izahay satria fotoana tokony hararaotina izao ahafahana manampy ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Fandraisana anjara manokana ho amin’io tetikasa io ary anjara biriky ahafahana manampy ny mpiray tanindrazana…”, hoy ihany izy ireo.
Misandrahaka amin’ny sehatra samihafa…
Nianatra momba ny fitantanana sy ny lalàna Rakotoarivelo Mamy ka hanampy ny ao Talata volonondry amin’ireo sehatra ireo. Lasa mpanolotsain’ny Tanàna ary mitondra tolo-kevitra ho amin’ny fanjakana tsara tantana. Eo koa ny fanajariana ny tanàna sy ny fanorenana na ny fanatsarana ny endriky ny tanàna… Nianatra momba ny fambolena sy ny biolojia kosa Rakotoniaina. Misy amin’izy ireo ny nianatra momba ny fampandrosoana na koa efa miasa momba ny informatika. Manampy ireo ny manana traikefa amin’ny asa tanana na koa ireo misahana ny fiandraiketan-draharaha sy ny varotra… Mianatra sy miasa any Frantsa sy Canada ary Etazonia ny maro amin’izy ireo. Haharitra telo volana kosa ny asa hatao any amin’ireo kaominina telo ireo. Nanampy sy nanamora izany rehetra izany ny eo anivon’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny.